siifsiin – Page 2 – siifsiin
Gaaddidduu keen arge
Maaliif na sodaattee Narraa achi fagaatee! Maalan sitti yakke Himadhu quuqqakee Dhala kee hin ajjeefne amaanaa keehin nyaanne Iccitii garaakoo hunda sin dhoksine Jiidhas sirraa kutee qoonqoo sin gogsine Simaafan jiraadha amma dadeetti koo Maaliif na dhoksite maali ballessaankoo Kan, nattii si ammeessee garaa asi jabeessee Alaala nu dhabee wal nu kajeechise Siif jedhee miidhamee … Continue reading Gaaddidduu keen arge
Madaa qonyonyaa hin qabne kan namni namaa hin beekne; kulkula jaarraa hedduu dawwaas kan hin arganne. Madaan malaa hin qabne abidda cidii keessaati. Qoreen gaafa sanaa isheen laga ce’umsaas nu keessatti hafte. Kan nuuf tolu dhabnee doobbii fi gurgubbeen nutti maratte. Bara dhufaa darbaa jirma jiidhaa fi ulfaataa baannee halkanii fi guyyaa; bonaa fi ganna … Continue reading Madaa
Abdii eegaa teenyee amma abdiin jiraannuu Dhaloota abdatame nuti maaf hintaanuu? Kan kaleessa ture dhaloonni nuduraa Abdiisaa bor nyaata har'a alala guuraa Nuufis sooratasaa abdii nuukudhaame Abdiin bara taru jabeessee nu dhaane Nuti hoo maal yoo goone wayya? Madaan bara hedduu akkamiin nufayyaa? Moo nutis abdii waliin dhalannee? Abdiin bara baanee abdiidhaanis duunaa? Dhaloota nuboodaas … Continue reading Abdii
NASA (The National Aeronautics and Space Adminstration) Bulchiinsa Qorannoo Baldheensa Waaqaa
Bulchiinsi qorannoo baldheensa waaqaa Ameerikaa (NASA) kan hundeeffame ALA. Jul/ado/.bara 1958dha.Kan hundeesses mootummaa Ameerikaa yoo ta’u,qajeelfama Pirezidaantii USA tibba sanaa Daawwit Esinaawere jedhamaniinidha. Wiirtuun qorannoo kanaa Waashingiton si’a ta’u,wiirtuwwan xixiqqaa kudhan ta’an’mmoo Kutaalee Ameerikaa garaa garaa keessatti argamu.Wiirtuu qorannaa baldheensa waaqaa kana keessa hojjettoota 17,345 ol ta’an kan jiran si’a ta’u, akka ragaan ALA bara … Continue reading NASA (The National Aeronautics and Space Adminstration) Bulchiinsa Qorannoo Baldheensa Waaqaa
Warra badu miti